Last updated - 12/10/2011
ရသစုံ မြန်မာ ဘလော့များ
Novels set during the French Revolution-- - https://www.theguardian.com/books/2013/jul/10/top-10-french-revolution-novels-jonathan-grimwood
စွန့်လွှတ်ခြင်း..... - မြတ်စွာဘုရား ဂေါတမဘုရားမဖြစ်ခင် လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတယ်...။ ဂေါတမဘုရားရဲ့ စွန့်ခြင်းကြီး ငါးပါးတွေကတော့ (၁) ဓနပရစ္စာဂ - ပဒေသရာဇ် ဧကရာဇ် ...
ကျူးဘားသွား တောလား - ၄ - ၂၀၁၉ မေ ၆ တနင်္လာနေ့မိချောင်းခြံ၊ အင်ဒီးယန်းရွာ၊ ပလရာလာဂါကမ်းခြေကနေ ဟာဗားနားကို စောစောပြန်ရောက်လို့ညနေစောင်းမှာ ဟာဗားနားဟောင်းဖက်ကို လမ်းလျှောက်ထွက်ြ...
ခဈြလှစှာသောပွညျပွေး (၅၇) - မိကောကျ တိုငျးပွညျအတှကျဆို ဘာမှ မလိုဘူး ကိုယျစီ ရငျထဲ အခဈြပငျလေးသာ ရှငျအောငျမှေး ဘယျတော့မှ စဈမပွငျလနေဲ့။ ။ *အောငျဝေး* (စကျတငျဘာ ၈၊ ၂၀၁၉) ## *ချ စ် လှ စ...
အလွဲများနဲ့တော့စကားနား - တော့စကားနား နယ်မြေထဲကို တိုးဝင်သွားကြဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ အလာလမ်းအတိုင်း ချင်းဂွေ့ကနေ ဖီရန့်ဇေကိုပြန် ဖီရန့်ဇေကနေ ကားငှားပြီး စပျစ်ခင်းတွေ၊ တောင်ကုန်းတွေရှိတဲ...
အမေ ... သို့ ... - အ​မေသို့ ... လက်​ဆယ်​ဖြာမိုး ဦးနှိမ်​ချိုး၍ ရှိခိုး​နေ​သော အ​မေအို ... ။ . ဖခင်​ကိုယ်​စား တိုင်းပြည်​အားကို ညည်းတွားခြင်းကင်း ထမ်း​ဆောင်​ခြင်းဖြင်​...
::Just Speaking Out Loud::
Jodi Picoult – Small Great Things - Jodi Picoult ရဲ့ Small Great Things ကို ၂၀၁၇ ကတည်းက ဝယ်ထားပေမဲ့ အခုမှပဲ သေချာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံက လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအကြောင်းကို မ...
( agga ) အဂ္ဂ ဟိုတွေး ဒီတွေး
အောင်မြင်တဲ့ ဘဝတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် - ============================ အောင်မြင်တဲ့ ဘဝတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ============================= ( ၁ ) ကျန်းမာရေး ( ၂ ) လူမှုရေး ပြုမူ၊ ပြောဆို၊ ကျင့်ကြံနေထိုင်...
Miracle Box Cracked 2.58 Loder Only - Download>>>http://123link.pw/cYZrPJrG
dimana bikin tas promosi bergaransi di area Bulungan konta no. 0813 8631 3043 - semampainya aktivitas perdewanan, perkuliahan maupun umum pada kesibukan seminar dan workshop menyebabkan bermacam perlengkapan kegiatan berikut dibutuhka...
လူ ကိုဖန်ဆင်းခြင်း - The Creation of Man Publish at Calameo
De Beeldspraak van De Tarot(တာရော့ ၏ ပုံရိပ်များ ) -
စဉ်းစားပါဦး... - တစ်ခါတုန်းက မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေပါတယ်။ ညနေချမ်းရောက်တော့ ရှင်ရာဟုလာ သီတင်းသုံးရာ သရက်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပါတ...
Microsoft Office Professional Plus 2016 - 2016 Happy New Year ! ! ! သူငယ်ချင်းများ အားလုံးအတွက် Microsoft Office Professional Plus 2016 OS 32 bit and 64 bit ကို သူငယ်ချင်းများအားလုံး အဆင်ပြေအောင် ...
Menyediakan Kontak BBM Murah Bergaransi - *Menyediakan Kontak BBM Murah Bergaransi* Menyediakan Kontak BBM Murah Bergaransi | How to e-mail both increased fuel briskly to communication in liabilit...
ဒီမိုကရေစီ ရပြီ မေမေ - ဒီမိုကရေစီ ရပြီ မေမေ ကိုကာကိုလာ သောက်လို့ရပြီ မာစီးဒီးလည်း ဝယ်လို့ရပြီ KFC လည်း စားလို့ရပြီ နိုင်ငံခြားသားတွေ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေပြီ ပရောဂျက်သမားတွေလည်း အိ...
ပြန်လည်နိုးထခြင်း - ဘာလိုလိုနဲ့ နွေဦးပေါက်ခဲ့ပြီ ....အော် မရောက်တာကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ရွာလေးဆီပြန်လာခဲ့မိရင်း ရော်ရွက်ဝါလေးတွေ လေမှာဝဲနေတဲ့ နွေဦးရာသီအတွက် အလွမ်းဖွဲ့ဆောင်းပ...
ဒီနေ့ အတွေး - တွေးမိတာ လေးပါ။ ( နေရာတကာ ၀င်ပါချင်တဲ့ အကျင့် က တားမရပြန်ဘူး :D ) ဆိုးသွမ်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ ကို သီလ၊ သမာဓိ နှင့် ပြည့်စုံကြတဲ့ အရှင်မြတ်၊ ဆရာတော်ကြီး ...
Nature Active - Myanmar Burma Trip Information and Travel Assistance
Super Sunday Moh Hin Gar - When you are away from your country, definitely miss the mother land however you are enjoying the current lifestyle at oversea. Asatypical Burmese woman ...
ဧည့်သည်ကြီး -ီဆေးလိပ်လည်းတို နေလည်းညိုပြီ ငါ့ကိုပြန်ပို့ကြပါလေ တင်မိုး
မောင်လေးသို့ ပေးစာ (၆) – စိတ်မညစ်ပါနဲ့ မောင်လေးရေ - မောင်လေးရေ… နေကောင်းရဲ့လား။ အခုတလော မမ နည်းနည်းစိတ်ညစ်နေတော့ မောင်လေးဆီကိုတောင် စာမရေးဖြစ်ဘူး။ မောင်လေးဆီကို စာရေးဖို့တော့ သတိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ညစ်တာတွေ...
2013 THINGYAN - THINGYAN (NEW YEAR) GREETINGS Hi everyone! Mingalarbar, sending “Auspiciousness” to all of you from Yangon, Myanmar. We have entered into another glorious ...
Be Happier: 10 Things to Stop Doing Right Now - ပျော်ရွှင်မှု ရချင်ရင် ဒီအလုပ် (၁၀) မျိုးလုပ်နေတာကို ခုချက်ချင်း ရပ်လိုက်ပါ။ အပြစ်တင်ခြင်း (Blaming) -------------------- လူတွေ အပြစ်လုပ်မိတာဟာ ပုံမှန်ပါပဲ။ က...
မလေးရှားရောက် အရက်သောက်တတ်သူ မြန်မာများအတွက် အထူးသတင်း - FBပေါ်မှာစိတ်မချမ်းသာစရာတွေနဲ့ပြည်နှက်နေတဲ့အချိန်ဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်လိုစိတ်မရှိပါဘူး၊အလားတူသတင်းမျိုးကိုဦးကျော်သူအပါအဝင် ကပုန်းနာရေးကူညီမူ့အသင်းမှညီလေး...
အချစ်ညရင်ခုန်သံ(စိုးပိုင်) - *Original Song* Karaoke Song
ED's Little Heaven
နောင်ခိုင် ခရီးစဉ် - ဒီနောင်ခိုင်မြို့လေးက လာအိုနိုင်ငံက ဗီယန်ကျန်းမြို့နဲ့ နယ်နမိတ် ထိစပ်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က နယ်စပ်မြို့လေးပါ။ မြို့လေးက အေးအေးချမ်းချမ်းရှိသလို မြို့ခံလူေ...
''ခလေးဘဝ... ကျော်ဦး၊ သိန်းညွန့်နဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဆက်စပ်ကြည့်မိခြင်း" - အခုတလော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကြားနေ၊ သိနေရတာတွေဟာ ကျနော်ငယ်ငယ်က တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေ ရွယ်တူသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျနော်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ တော်တော်ေ...
Lock and Load - Golden Trade Postမှာတုန်းက NEMကို 51-52ကြားထဲမှာရရင် ဝယ်သင့်ကြောင်း Recommendလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က Price Actionက ကွက်တိပဲ။ မုဆိုးဟာ အမဲကောင်ရေလာသောက်တဲ့အထိ စ...
မျိုးချစ်ဂုဏ်ရည်ဆုပေးပွဲ (ရုပ်သံ) -
မငိုနဲ့ တနင်္ဂနွေ - ဖြုတ်ကနဲ့ကြွေကျတဲ့ နှင်းတစ်ပွင့်က ဒီအပင်ကတဲ့လား လေအလွင့် ကြွေလွင့်ခဲ့တာ နှင်းစက်မဟုတ်ပါဘူး ဒီည မှာ ကြွေကျခဲ့တာ မျက်ရည်တစ်စပဲဖြစ်မှာပေါ့ ။ ဘေးနားမှာ အာဇာနည်...
ဘ၀ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်မှုပေးနိုင်တဲ့ အရာကတော့ စိတ်နေစိတ်ထား - အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ ABCD . . . Z အထိဆိုရင် ၂၆ လုံး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အက္ခရာတွေကို ဒီလိုနံပါတ်စဉ်တွေ ထိုးပြီး စီကြည့်ရအောင် . . . A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H...
Recording နှင့်ပတ်သက်သော ၀က်ဘ်ဆိုက်များ - 47 Sites Every Recording Musician Must Visitအထက်ပါလင့်မှာ Recording, Mixing စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆိုက်တွေကို စုပြ...
- GOOD AFTERNOON, I START BLOG THIS AFTERNOON.
မွေးနေ့လက်ဆောင် - "အား ... အမလေး ... " ဝမ်းဗိုက်တွင်းမှ ရုံးကန်မှုကြောင့် နာကျင်စွာ ခံစားနေရသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တစ်ယောက် ညီးညူနေသည်။ ကလေး၏ တွန်းကန်အား မည်မျှရှိသည်ကို မ...
အမေ့အိမ် - အမေ့အိမ် လောက် ပျော်စရာကောင်းသော နေရာမရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်တော့ ထင်တာပဲ...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ အခု စိုးစန္ဒာထွန်း( အမေ့အိမ် သီချင်းလေး) တင်လိုက်တယ်ဗျ...။ ကျွန်ေ...
Why the world needs - Rest of your post
အိပ်မက်စေတန် - ဒီ blog အတွက် စာမရေးဖြစ်တာတောင် တော်တော်ကြာသွားပြီ။ အန်တီဆောင်းကိုလဲ post တစ်ခုလောက်တော့ မကြာခင်ရေးပေးပါမယ်လို့ ကတိကလဲ ပေးထားတော့ ဘယ်လို အကြောင်းအရာမျိုးကု...
နံရံစိမ်းစိမ်း (သက်ငြိမ်သစ်) - ကျောမှီလိုက်တယ် သူ့နာကျင်မှုဆီ မီးမကူးမီ ခေါင်းကိုမော့လိုက်တယ် လက်နှစ်ဘက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်လိုက်တယ် သံဇကာကွက်တွေထဲ တအိအိကျွံဝင်နေတဲ့အရိပ် သူ့ခြေထောက်ေ...
Daily Design Workout
Daily Design was Stopped - The daily design workout has been stopped since June 2010 due to my worsening physical condition. I've been suffering fromanasty RSI(Repetitive strain in...
ပန်းချီနဲ့ဓါတ်ပုံပေါင်းစပ်ရေးဆွဲထားသော လက်ရာများ - Src : toxel.com အားလုံးကို ခင်မင်လေးစားလျက် ၀ိုင်း
ခေတ်ဟောင်းတေးများတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ - ကျွန်တော့်ရဲ့ ၀ါသနာအလျောက် စုဆောင်းထားတဲ့ မြန်မာသံခေတ်ဟောင်းတေးတော်တော်များများရှိပါတယ်။ မူရင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးစုထားတာပါ။ များသောအားဖြင့်တော့ myanmar cupi...
ရင်ထဲကပန်းတစ်ပွင့် ( သို့ ) ရင်ခွင်တံခါးက ပေါက်ကွဲသံ
IT Ko Htwe
Wireless Cracking/WEP Crack - ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ ဖော်ပြချင်တာကတော့ Network နဲ့ပတ်သက်ပါတယ် WEP ကို Crack လုပ်ခြင်း (သို့) Password Key ကိုရှာခြင်းပါ။ ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့လိုတာက Desktop ကွန...
OST :9Dragons ~ Acclaim - Acclaim &JU9Dragons rS OST vdkU ac:vdkU&r,fh In Game Music awGudk t,fvfbrfwpfcsyfvdk em;axmifcsifolrsm;twGuf ... oufqkdif&m website rsm;rS mp3 sound tr...
Kitty For Me
Dong Bang Shin Ki - The Secret Code - Dong Bang Shin Ki - The Secret Code Release Date: 2009/03/25 Genre: Jpop / ballad / dance / rnb Language: Japanese CD1 01.Secret Game 02.FORCE 03.Doushi...
7ven Friends Network
The British Award 2009 - Live Performances - Some of the YouTube videos from the British award 2009 performances. *The Promise - Girls Aloud* *ColdPlay* *Estelle & The Ting Tings*
မတ်လ (၁၇) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ တပ်ထွက်မိန့်ခွန်း ၆၃နှစ်မြောက် အမှတ်တရ - နေရာ။ ယခုတော်လှန်ရေးပန်းခြံ နေရာ အချိန်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂျပန်တို့ အုပ်စိုးထားပြီးရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေး ပေးကာ မြန်မာ့ သယံဇာတများကို ကျောက်မျက်၊ ကျွန်းသစ...
ကျွန်တော် နှင့် ဟိုတစ်စဒီတစ်စ
Maung Kyaw Zay Ya
AUGUST 27 - ကဗျာ
Google News မှ မြန်မာ သတင်းများ
Myanmar - Google News
Donald Trump hosts Australia PM at the White House - BBC News - 1. Donald Trump hosts Australia PM at the White House BBC News 2. Trump's phone calls with foreign leaders are everything you think they woul...
Burma - Google News
An unshackled Trump finally gets the presidency he always wanted - POLITICO - 1. An unshackled Trump finally gets the presidency he always wanted POLITICO 2. Donald Trump hosts Australia PM at the White House BBC News ...
ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းဌါနများ
လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသို့
wanakyaw000, here's the link to reset your password - This link will expire in 24 hours [image: LinkedIn] wanakyaw000 wanakyaw000 Hi wanakyaw000, Reset your password, and we'll get you on your way. To ch...
Khin Maung Toe sing @ WDC - Khin Maung Toe's Concert with Zaw Myo Htut, Sandayar Aung Win, Mi Mi Win Pe, 18th Dec 2011 (Sunday), Rockville, Washington DC Metro
Ron Paul on the campaign trail - Dolor donec sagittis sapien. Ante aptent feugiat adipisicing. Duis interdum sed arcu et nullam eu accumsan nam gravida vulputate sed. Dolor urna integer...
Heal Burma News
Grassroots Human Rights Education Development
နည်းပညာ ဝေမျှသော ဘလော့များ
Ranked Gaming Client Portable - Ranked Gaming Client လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Online မှာ တက်ပြီး Dota Skill စမ်းချင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံး နေရာလေးတစ်ခုပါပဲ။ အင်တာနက်ဂိမ်းဆိုင်များအတွက် မရှိမြ...
ခင်မောင်စိုး (မွန်ပြည်နယ် ကျိုက္ခမီမြို့ )